Home » News » Rising Sun Pictures Fanabeazana: Joannah Anderson Fanadihadiana
Rising Sun Pictures Fanabeazana: Joannah Anderson Fanadihadiana
Mianatra ny fomba hahatongavana ho matihanina.
Adelaide, South Australia- Rising Sun Pictures Ny fanabeazana dia natao ho toy ny vato mitaingina tanora mpanao artika maro efa zatra nampiakatra ny tifitra avy tao amin'ny efitrano fianarana. Joannah Anderson dia iray. Nahavita ny asany voalohany tamin'ny maha Junior 12D Lighting Artist tao amin'ny studio Studio Mill Filmily ao Adelaide, izay vao nahavita ny onjam-peo RSP / UniSA 3 herinandro fianarana maimaim-poana amin'ny RSP / UniSA 3 herinandro. Ny Sale, teratany Victoria dia hametraka ny fahaiza-manaony nianarany tao amin'ny teknikan'ny haino aman-jery XNUMXD amin'ny fampiasana fampiharana amin'ny tetikasa sarimihetsika ho an'ny sarimihetsika eran-tany.
Vao haingana i Joannah dia niresaka tamin'ny RSP momba ny traikefany tao amin'ny RSP, ny asany vaovao sy ny hoaviny.
RSP: Taiza no nianaranao voalohany ny vokatra avy amin'ny maso?
Joannah Anderson: Ao amin'ny AIE (Academy of Interactive Entertainment) any Adelaide. Izaho dia 18 ary te-hianatra momba ny fanatanjahantena fa ny tanànako, Sale, tsy nanolotra na inona na inona. Raha ny zava-nitranga, nikasa ny hifindra any Adelaide ny ray aman-dreniko ary vao avy nisokatra i AIE, ka niaraka tamin'izy ireo aho.
RSP: Inona no nianaranao?
JA: Animation 3D sy sary. Nanomboka tamin'ny programa lalao aho, saingy nafindra tany amin'ny sarimihetsika ary nahazo mari-pahaizana Advanced in Screen and Media.
RSP: Inona no nitarika anao ho amin'ny RSP?
JA: IANA dia nanana varavarana misokatra ary iray tamin'ireo mpandahateny dia avy amin'ny Rising Sun Pictures. Nieritreritra aho raha tsy nomena asa tsy vita avy any am-pianarana aho, mbola hahita traikefa bebe kokoa amin'ny RSP aho.
RSP: Ahoana no nahitanao ny lalana?
JA: Tena nampahery tokoa izany. Miasa ao amin'ny trano fianarana studio ianao ary mianatra avy amin'ny matihanina, ary afaka miara-miasa amin'izy ireo ianao amin'ny fotoana rehetra. Nahazo fahatsapana aho ny amin'ny fomba fiasa lehibe iray, ny fomba fifandraisan'ny olona. Ny fandaharam-potoana dia ny fandaharam-pahaizana Graduate Graduate amin'ny Dynamic Effects and Lighting. Nampiasa an'i Houdini izahay. Izany no fotoana voalohany nampiasako ity rindrambaiko ity.
RSP: Sarotra ho anao ve ny mihazakazaka haingana?
JA: Kely fotsiny. Ny sasany tamin'ireo mpiara-mianatra tamiko dia nanana traikefa tamin'ny Houdini, noho izany dia nisy zavatra azoko natao. Saingy nanampy ahy avokoa izy rehetra. Ny fiheverana dia somary tsy mitovy amin'ny rindrambaiko efa nampiasako taloha, fa rehefa nahazo fahatokisana aho dia mora.
RSP: Tianao ve ny lalao?
JA: Oh eny, tiako izany! Mahagaga izany.
RSP: Nisy mpampianatra iray nanao fiantraikany manokana teo aminao?
JA: Eny. Greg sy Sam, mpampianatra tariby, no nanova ny hevitro manontolo amin'ny fahazavana. Rehefa niditra ny lalana aho dia nieritreritra fa tsy ho liana amin'ny fahazavana. Te-hiditra ao amin'ny VFX aho, fa ny antsasak'izay nahitana an'io. Niseho taminay i Greg Monsters, Inc. ary nanasongadina ny antsipiriany momba ny hazavana, ahoana no ahafahanao mampiasa tariby mba haka loko sasany. Tena nalahelo azy io izy ary niboridana ahy. Nianatra aho fa afaka milaza tantara mitombina ianao, na mitarika ny mason'ny mpijery amin'ny faritra iray amin'ny sarimihetsika. Nampianatra antsika ara-bakiteny ny fomba hanodinana ny hazavana ho zavakanto izy.
RSP: Ohatrinona ny fiovanao manoloana ireo herinandro 12 ireo?
JA: Nihatsara be izy ireo, tena haingana. Raha nampihatra ny RSP aho dia tsy nihevitra fa ho ekena. Tamin'ny fotoana nahavitako ilay fianarana, dia nanana toeram-pisakafoanana manaitra aho izay tiako. Nalefako tao amin'ny Technicolor izy ireo nahatoky fa nanana fahafahana hanao asa iray aho. Nahatsiaro ho tsara kokoa ny tenako tamin'ny nanosika ny lalana.
RSP: Ankoatra ny fampiofanana ara-teknika, inona no nianaranao momba ny maha mpanakanto matihanina anao?
JA: Nanatrika ny fotoam-pivoriana androany izahay izay nijery ny sehatry ny indostrian'ny indostrialy izay niresaka taminay momba ny asany. Nanana sahan-kevitra maromaro niaraka tamin'ireo mpandraharaha izahay, izay nanome toro-hevitra momba ny fangatahana asa, ny fomba fitondran-tena mandritra ny dinidinika, ary ny tadiavin'ny mpampiasa. Tena nanampy ahy tamin'ny fanadinadinan'ny asako izany.
RSP: Nahafinaritra anao ve ny fandaharana?
JA: Nihoatra azy ireo izany. Tamin'ny voalohany, nihevitra aho fa henjana loatra ka tsy hahatakatra na inona na inona aho. Saingy tsy tonga ho marina izany. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny manokan-tena sy miasa mafy. Tao anatin'ny telo volana, nampianatra ahy ny maha-matihanina ahy ny Rising Sun Pictures.
RSP: Ahoana no nandanianao ny asanao tao amin'ny The Mill?
JA: Manana havako iray miasa ao amin'ny orinasa aho ary nilaza tamiko izy fa tonga any Adelaide Technicolor. Nampihetsi-po aho. Roa herinandro taty aoriana, niantso ahy ho amin'ny resadresaka iray izy ireo. Tapa-bolana taorian'io, dia nomena asa aho.
RSP: Fantastic. Arahabaina!
JA: Misaotra anao. Fampiofanana tsara sy fandaharam-potoana tsara.
RSP: Inona no andraikitry ny asanao?
JA: Amin'izao fotoana izao dia miofana any amin'ny departemantan'ny tariby. Mbola tsy nanomboka ny famokarana. Izy ireo dia mampiasa an'i Katana. Noho izany dia mianatra programa iray manontolo indray aho. Saingy tsara izany. Tena mitovy amin'i Houdini izany.
RSP: Amin'ny farany dia hiasa amin'ny tetik'asa fialamboly ianao?
JA: Fetiben'ny horonantsary indrindra. Te-hiasa amin'ny filma aho hatramin'ny naha zazakely kely ahy. Tena mahatsikaiky aho fa hiasa amin'ny sarimihetsika amin'ny asako voalohany.
RSP: Aiza no antenainao hivoaka eto?
JA: Tiako ny mandeha any Vancouver na any Londres. Manana nofinofiko aho androany hanokatra ny trano fijeriko manokana. Saingy taorian'ny nanaovako ny tambazotra vitsivitsy ary nahafantatra ny olona.
RSP: Inona no torohevitra anananao amin'ny mpanakanto hafa?
JA: Ankafizo ny dingana. Aza tezitra mafy loatra. Tsy maintsy manomboka any amin'ny toerana hafa isika rehetra. Miantefa ora maro mba ho lasa matihanina miasa. Miezaha mafy ary asio fampisehoana matanjaka izay maneho ny maha-olona anao. Matokia ny asanao ary ho azonao izany. Raha efa niteny tamiko tamin'ny herintaona ianao fa hiasa ho mpanaingo mamirapiratra, dia ho nihomehy aho. Nefa eto aho.
Momba ny Rising Sun Pictures:
Ao amin'ny Rising Sun Pictures (RSP) dia mamorona vokatra ara-tsindrimandry ho an'ireo fianarana lehibe manerana izao tontolo izao. Ny fototry ny fisiantsika dia ny famoronana sary miavaka. Ao am-pon'ilay ekipa manana talenta dia misy fahalalana sy fahaiza-manao maro samihafa, ahafahana mamolavola fototra iraisana izay ahafahantsika miara-miasa mba hamaha ny olana ary hanome vahaolana tsara ho an'ny mpanjifantsika. Nahavita asa mahagaga mahatalanjona tokoa izahay tamin'ny alalan'ny fanomezana vahaolana vaovao ho an'ny asa fanamboarana ara-teknika. Manana ny fahaiza-manaony sy ny talentany izahay mba hanatanterahana ny filan'ny mpanjifanay.
Ny sarimihetsika mavitrika dia ahitana ny tetikasa 120, anisan'izany ny Tomb Raider, Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-Men: Apokalypse, Game of Thrones Season 6, Ny Tarzanan'i Tarzan, Andriamanitr'i Ejipta, Pan, X-Men: Andro Farany Ny lasa, The Franchise Hunger Games, ny Franchise Harry Potter, Gravity, The Wolverine, Prometheus ary The Great Gatsby.
PR mpanao asa tanana
Lahatsoratra farany ny mpanao asa tanana PR (jereo rehetra)
AES Los Angeles Section and SMPTE Hollywood Section to Showcase Sound for Sony Pictures’ Spider-Man™: Into the Spider-Verse at January Meeting - Janoary 18, 2019
Alkemy X Adds Former Network Exec Glen Freyer to Leadership Team - Janoary 16, 2019
Alkemy X’s Andy Singer to Lead NATPE Panel on Engaging Consumers through Branded Content - Janoary 8, 2019
fanabeazana Spears & Arrows Visual Effects	2018-11-08
Previous: Chapelle Calvary Modesto manetsika ny efitrano fisafoana, ny fampivoarana ny fampielezana ny Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Next: Ny Bannister Lake dia manambara ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Fikirakira an'ny Live Data Graphic Design Firm Motion
Archives Select Month Janoary 2019 (182) Desambra 2018 (243) Novambra 2018 (406) Oktobra 2018 (496) Septambra 2018 (495) Aogositra 2018 (397) Jolay 2018 (876) Jona 2018 (869) May 2018 (871) Aprily 2018 (831) March 2018 (779) Febroary 2018 (684) Janoary 2018 (605) Desambra 2017 (396) Novambra 2017 (712) Oktobra 2017 (835) Septambra 2017 (608) Aogositra 2017 (583) Jolay 2017 (710) Jona 2017 (543) May 2017 (621) Aprily 2017 (695) March 2017 (704) Febroary 2017 (340) Janoary 2017 (364) Desambra 2016 (606) Novambra 2016 (344) Oktobra 2016 (556) Septambra 2016 (622) Aogositra 2016 (1056) Jolay 2016 (532) Jona 2016 (414) May 2016 (505) Aprily 2016 (713) March 2016 (743) Febroary 2016 (382) Janoary 2016 (123) Desambra 2015 (357) Novambra 2015 (327) Oktobra 2015 (152) Septambra 2015 (259) Aogositra 2015 (440) Jolay 2015 (276) Jona 2015 (140) May 2015 (128) Aprily 2015 (435) March 2015 (289) Febroary 2015 (298) Janoary 2015 (131) Desambra 2014 (103) Novambra 2014 (194) Oktobra 2014 (149) Septambra 2014 (381) Aogositra 2014 (250) Jolay 2014 (287) Jona 2014 (363) May 2014 (231) Aprily 2014 (744) March 2014 (560) Febroary 2014 (427) Janoary 2014 (289) Desambra 2013 (137) Novambra 2013 (545) Oktobra 2013 (290) Jolay 2013 (26) May 2013 (13) Aprily 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)